Ma sameyn lahayd wixii ninkan uu sameeyay? (Afduube is kashifay) - Caasimada Online
Home Warar Ma sameyn lahayd wixii ninkan uu sameeyay? (Afduube is kashifay)
Ma sameyn lahayd wixii ninkan uu sameeyay? (Afduube is kashifay)
Gabar yar oo lagu magacaabo Anna ayaa la soo wariyey in la waayey galabnimadii Khamiista aydoo dib loo helay subaxnimadii Jimcaha ka dib baadigoob xooggan oo la sameeyey.
“Nin isagu laga shakiyey ayaa qirtay in uu afduubtay Anna isagoo hayey muddadaas” ayaa lagu yiri hadal ay websitekooda jimcihii ku qoreen booliiska magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Hadalka qoraalka ah ayaa lagu sheegay in baarintaanka lagu hayo qofkan afduubka geystay uu sii socon doono ilaa toddobaad dhamaadka (Weekend), isla markaana loo qorsheeyey in lala yeesho wareysiyo dheeraad ah.
“Qareenka ayaa go’aan la xiriira damaanad gaari doona inta lagu guda jiro week endiga ama maalinta axadda”.
Anna ayaa la waayey aydoo ka baxday gurigeeda wax yarna ay u sii lugeysay dhanka Iskuulka xaafadda Örgryte ee magaala madaxda labaad ee dalka Sweden subaxdii Khamiista.
In ay maqan tahay lagama soo warin Iskuulka ilaa laga gaaro casiir liiqii, waxaana markaa la sameeyey baaritaan aad u wayn oo ay ka qeyb galeen booliiska.
Ku dhowaad 800 oo xubnood oo ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka qeyb galay baadi goobka oo ay soo agaasintay Hey’ad ka shaqeysa arrimahaas oo lagu magacaabo Missing People Charity.
24 jir looga shakisanaa inuu qaatay gabadha ayaa isagu ka qeyb galay baadi goobkaas, ugu danbeyntiina uu soo wareejiyey gabadha, isagoo ku doodaya inuu ka helay goob beer lagu nasto ah.
“Waxaan su’aalay meesha uu ka helay gabadha. Waxuu farta ku fiiqay xagga- isagoo tilmaamay goob beer lagu nasto- ayaan ka helay” sidaas waxaa yiri ohn Peterssonoo la hadlayey wakaaladda wararka ee TT News Agency.
“Waxey aheyd arrin murugo ah oo xadgudub ah. Waxey keentay shaki” ayuu raaciyey Petersson.
Ninkan laga shakiyey ayaa isagu loo sheegay inuu fariisto oo uu sugo inta booliiska ka imaanayaan.
Booliiska ayaa baadigoob ka bilaabay mar kale qol ku yaalla dhulka hoose oo ka dhowaa meesha kaasoo looga shaki qabay in lagu hayey gabadha yare ee Anna oo ayadu afduubka loo geystay, sida ay qortay jariidadda maalinlaha ah ee Göteborgs-Posten.
Iskuulka ay dhigati gabadhan yar ayaa lagu cambaareeyey soo warin la’aanta ah in Anna la waayey ilaa galabnimadii Khamiista, waxaana maalinta Isniinta la sameyn doonaa baaritaan arrinkaas Iskuulka lagu eedeeyey.
Wax war ah ma jirin ah in Anna ay dhibaato soo gaartay 19 saacadood oo la waysanaa. Aabaheed oo la hadlay wargeyska maalinlaha ah ee Aftonbladet ayaa yiri “Hadda waa ay fiican tahay wax dhib ahne ma qabto”.
Waalidiinta Anna ayaa wargeyska u sheegay in ay ka quusteen in ay dib u helaan gabadhooda 9 jirka ah ee Anna, ka hor inti aan telifoon loo soo dirin 3 am ee jimcihii.
“Dareen aan la aqbali Karin ayuu ahaa in gabadheeni la qaatay ee dib loo helay ay bad qabto” ayuu Anna aabaheed u sheegay wargeyska.
WD: Yusuf Shuqale Hassan